अश्लिल फोटो भाइरल ! १० कक्षामा पढ्ने छात्राको अश्लिल फोटो सबैतिर भाइरल «
अश्लिल फोटो भाइरल ! १० कक्षामा पढ्ने छात्राको अश्लिल फोटो सबैतिर भाइरल
प्रकाशित मिति : ११ जेष्ठ २०७६, शनिबार २२:३७
काठमाडौ- १० कक्षामा अध्ययनरत एक छात्राको अश्लिल फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।छात्राको तस्बिर भाइरल भएपछि उनका अभिभावकले प्रहरी चौकीमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । छात्रासँगै पढ्ने तीन युवकलाई शंकाको घेरामा राखेर पक्राउ गरिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार छात्राका आमाले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नी छोरीको अश्लिल तस्बिर देखेपछि प्रहरी चौकी पुगेकी हुन् । यो घटना भारतको हो ।एक युवतीले आफ्नो टाइमलाइनमा शेयर गरेको तस्बिर देखेपछि आमाले प्रहरीमा खबर गरेको जोगिन्द्रनगर प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।गुजरात प्रहरीका अनुसार घटनाको अनुसन्धान भइरहेको अमरउजाला दैनिकले समाचार छापेको छ ।
जान्नुहोस् अक्षर सुधार्ने ८ तरिका
झट्ट हेर्दा राम्रो लाग्ने अक्षर नियम संगतले सही नहुन सक्छन् । विश्वका अधिकांश भाषा अक्षरको बनोट सीधा र बक्र रेखा ‘ऋ’ बाट नै बनेको हुन्छ । हरेक खालका अक्षरको उत्कृष्ट लेखाइका लागि केही आधारभूत कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ती यसप्रकार छन् स्
– अक्षर स्पष्ट र सबैले बुझ्ने हुनुपर्छ ।
– अक्षरको आकार समान हुनुपर्छ ।
–नेपाली अक्षर लाइनभन्दा मुनि झुन्ड्याएर लेख्नुपर्छ ।
–अक्षरको माथि अनिवार्य डिको तान्नुपर्छ ।
–डिको दिँदा सीधा र कापीको तेस्रो धर्को छोपिने हुनुपर्छ ।
– अक्षरमा दिइने मात्राले अक्षर छुनुहुँदैन ।
– डिकोले सबै अक्षर र मात्रालाई छुनुपर्छ ।
–एउटा अक्षरले अर्को अक्षर र एउटा शब्दले अर्को छुनुहुँदैन ।
रक्सी धेरै पिएपछि ‘ह्याङओभर’ किन हुन्छ ?
नयाँ वर्ष आइसकेको छ । पार्टीहरू चल्दैछन् । रक्सीका गिलासहरू एक अर्कासँग ठोक्किँदैछन् । कुनै आफन्तसँग त कुनै साथीहरूसँग । अलिकति धेरै नै पिइँदैछ होला ।
आज भोलिका मानिसहरुको प्रश्न यही हुन्छ हिजोको ह्याङओभर अझै छाडेन । तर ह्याङओभर किन भइरहको छ भन्ने सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ ।
मानिसहरू यसलाई धेरै पिएपछि भएको ह्याङओभर हो भन्छन्। हिलसा माछाको अचार खानु, अण्डा खानु वा ओएस्टर खानु, ह्याङओभर हट्छ पनि भन्छन्। अधिक रक्सी पिएपछि प्राय स् मानिसहरू ह्याङओभर भएको बताउँछन्। तर कुन उपायले तपाईँलाई ताजा बनाउला ? त्यस्तो कुनै उपाय छ कि छैन ?
रक्सी इथानोलबाट बन्छ। यसलाई हाम्रो शरीरमा भएको इन्जाइमले विग्रह गरेर अन्य विभिन्न रसायनमा परिणत गरिदिन्छ। यीमध्यै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एसिटेल्डिहाइड हो। यसलाई थप टुक्रा गरेर इन्जाइमले अर्को रसायन एसिटेटमा परिणत गरिदिन्छ। यही एसिटेट रसायन फ्याटीएसिड र पानीमा परिणत हुन्छ। केही वैज्ञानिकहरू ह्याङओभर यही एसिटेल्डिहाइडका कारण भएको विश्वास बताउछन् । तर केही अध्ययनहरूले यो रसायनको ह्याङओभरसँग प्रस्ट सम्बन्ध नहुने देखाएको छ।
केही जानकारहरू भने रक्सीमा मिसाइने अरू नै रसायनका कारण ह्याङओभर हुने बताउँछन्। ह्विस्की बनाउँदा अन्य धेरै किसिमका तत्त्व पनि निस्किन्छन्। धेरै पिएपछि मात्र मानिसहरूले तिनको उपस्थिति अनुभव गर्छन्।
कडा रङ्गका रक्सीमा यसको मात्रा बढी हुन्छ। त्यसैले बर्बन पिउँदा उत्तिकै भोड्का पिएभन्दा बढी ह्याङओभरको अनुभूति हुन्छ। तर यसको असर व्यक्तिपिच्छे फरकफरक हुन्छ। साथै पिउनुको असर वा ह्याङओभर पनि पिउने मानिसको उमेर र पिएको मात्रा अनुसार भिन्न हुन्छ।